Uchishandisa Wheelchair Midziyo Kuchengetedza Simba Rako
Kana iwe ukawana chirwere chekenza, huwandu hwesarudzo iwe hwaunofanirwa kutora hungangodaro hunowanda. Iwe unofanirwa kushanda padhuze nachiremba wako kuti uone nzira yako yekurapa uye ungatofanira kudzikamisa zviitwa zvako kuti muviri wako upore. Izvo zvishandiso pazasi zvinokuchengetedza iwe wakachengeteka uye wakasununguka paunowana kurapwa.
Kuti uchengetedze nhare kuburikidza nekurapa kwako, a wiricheya inogona kubatsira. kushandisa a wiricheya kufamba famba inochengetedza simba rako kune mamwe mabasa akakosha. Unogona kuchengetedza simba rako uchichengeteka kubva pakuwa izvo zvinogona kuitika zviri nyore mune yako isina kusimba mamiriro.
Nemhando dzakasiyana dze Mawiricheya iripo, unogona kuwana nyore nyore kuti ienderane nezvido zvako. Basa rinorema Mawiricheya zvinokuchengetedza iwe kushingaira munzvimbo dzakasiyana siyana. Chiedza chisina kuremerwa Mawiricheya akakosha zvakare kana iwe uchida imwe yekuwedzera tsigiro.
wiricheya maelevhuru anorega iwe usvike zvakaringana mazinga akasiyana eimba yako. Unogona kurara iwe wega yekurara, imba yekutandarira mumba yekutandarira kana kutamba mune yepasi nevana. Hapana chikonzero chekushushikana nezve kuneta kukwira masitepisi, unogona kufamba famba nemba yako wakasununguka.
Kana iwe uchigara munzvimbo yakazara mafashama, imba yako inogona kukwidziridzwa kudzivirira mafashama. wiricheya maelevheti anobatsira kwazvo munzvimbo idzi. Iwe unogona kunge wakaneta kwazvo mushure mekurapwa kwako uye kukwira masitepisi ekubhururuka kungave kuri kunetsa kwazvo.
Kunyangwe vamwe vangangoshandisa izvi sechikonzero chekutamira kune imwe imba kana kunyangwe nzvimbo yehutano, haufanire kuita izvozvo. Unogona kupora munyaradzo yeimba yako ne wiricheya erevheta. Iwe unozokwanisa kuwana zvirinyore nzvimbo dzese dzeimba yako uye unogona kuzorora mune yakasununguka uye inozivikanwa nharaunda.
Kukwira masitepisi kunobatsirawo kusvika kumatanho akasiyana mumba mako iwe uchiri mune yako wiricheya. Vanokubatsira iwe kusimuka nekudzika masitepisi. Kuisa masitepisi kukwira kuri nyore uye zvakaenzana nyore kubvisa kana hutano hwako hwave nani.
Zvakakosha kuti iwe ubvumire muviri wako iyo nguva inoda kurwisa kenza yako, saka zvakakosha kuchengetedza simba rako pese pazvinogoneka. Kuita kushandisa kweizvi Mawiricheya uye zvishongedzo zvavo, unogona kushandisa simba rako rakachengetedzwa kurapa pane kuti utamburire kutenderera.